TCM kwimo Athletic - Shijiazhuang YiLing Hospital
Phantsi kwenkokhelo ka kwithiyori TCM, eyona njongo sub-impilo, abakhubazekileyo, saka, ezingapheliyo izifo ezihlasela zosulele, ngokusebenzisa ezahlukeneyo amayeza emveli ase-China kunye namanye amanyathelo aluncedo ukunciphisa ifuthe kwekhono, ukuphucula umgangatho wobomi nokuphuhlisa imikhwa zokuphila elungileyo.
I TCM kwimo lweembaleki idibanisa lezemidlalo zemveli kunye nempilo yabantu banamhlanje, ukulawula impilo umzimba womntu, ukuncedisa ekunyangeni isifo, ukuhlanganisa Qi HIV emzimbeni, kwaye babe novakalelo ngakumbi kunyango isifo .
Ngokusekelwe kwi zemveli Chinese intshukumo kwimo amayeza, ezifana Taiji, ikarati eziqwenga ezisibhozo yiBrocade, sidibanisa ukomelela ngokwasemzimbeni omzimba womntu ukwenza intshukumo entsha kakuhle kwimo: i Chinese Ukugrunjwa akananto umthambo.
TCM kwimo lweembaleki lube nempembelelo entle umhlaza nokunyanga, scleroderma, yoma dystrophy, rheumatism, isifo neuron iimoto, udinwe, isifo seswekile, nephropathy, kunye nezinye iintlobo zezifo ezingapheliyo kunye namatyala kakhulu.
Kubhungisana neengcali ukuba imibuzo ethile.